Ratnanagar Online कोरोनाको कहर जोगिएर बनाउन सक्छौ अवसर – Ratnanagar Online
कोरोना भाईरस फैलिरहेको यो समयमा हाम्रा नातेदार,हामी संग परिचित वा अपरिचित कयौंले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यतिवेला हजारौंको संख्यामा कोरोनाको विरामीले अस्पतालमा मृत्युसंग संघर्ष गर्दै छन् । भाईरसले २१ औ शताब्दीको बिज्ञानलाई नै चुनौती दिईरहेको छ । अहिलेको समयमा बाहिर वातावरण हाम्रो विरुद्धमा छ । परिस्थिति मानवीय स्वास्थको विरुद्धमा छ । बाहिरको वातावरण हाम्रो विरुद्धमा भएको बेला हामीले आफुलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । साथ दिने भन्नुको अर्थ विषम परिस्थितिमा आफुले आफैलाई उत्साहित र आनन्दमय बनाउनु जरुरी हुन्छ । जुन समयमा हामी खुसी हुन्छौं हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर जान्छ यसमा कुनै सन्देह छैन किनभने स्वास्थ अनुसन्धान बाट प्रमाणित भैसकेको छ ।कोरोना भाइरसका कारण संक्रमण न्यूनिकरणका लागि निशेधाज्ञा लागु गरिएको छ र यो समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने सर्बसाधारणका लागी निकै कष्टकर तरिकाले दिनहरु कटेका छन् । अधिकांशको सोचाइ भनेको सबै चिन्तामा भएको बेला कसरी चिन्ता नगर्नु भन्ने पनि हुन्छ र पीर लिएर बस्ने गरिन्छ । यदि यो रोग लागे मरिन्छकी ? वा धेरै नै गाह्रो हुन्छ कि ? यस्तो प्रश्न आफै सोच्ने र अनावश्यक चिन्ता लिने गरेको पाईएको छ । तर हामी समस्या संग लडाइँ लड्दै छौ । समस्या थप्ने अरु मृत्यु भएका वा बिरामी लाई हेरेर तनाव लिने होईन । स्वास्थ मापदण्ड पालना गर्दा गर्दै यदि कोरोना भैहाले पनि, संक्रमित भएर मर्नेको संख्या अत्यन्तै कम छ त्यसैले अनावश्यक डर त्रास होइन बिरामी र उनीहरुको आफन्तको लागी समस्या समाधानको सहज वातावरण तयार गर्ने बन्नु आजको आबश्यकता हो । यसबाट हामी माहामारी समाधानको हिस्सा बन्न सक्दछौ ।
बिपत्तिमा सहयोगका लागी विभिन्न संघ,संस्था,ब्यक्तिहरुले आ–आफ्नो तहबाट स्वास्थ सुरक्षाका सामग्री ,खाद्यान्न,अस्पतालको लागी अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरिरहेका छन् । भाइरसले हाम्रो जीवनशैली बदल्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर हामीले जीवननै बदलिएको जस्तो मानिरहेका छौ । हाम्रो जीवन होईन जीवनशैली बदलिएको छ । त्यो पनि सामान्य वन्दै जानेछ । सडकमा सवारी साधनको चाप,सधै कार्यालय जानुपर्ने,कहिलेकाही घरमा बस्न पाए हुन्थ्यो यस्तै यस्तै बिषयमा हामी सधै गुनासो गर्दै आएका थियौ । माहामारीका कारण अहिले घरमा परिवार संग बस्ने समय मिलेको छ । फेरि परिवार संग लामो समय बिताउने अवसर मिल्ला नमिल्ला कमसेकम मिलेको समयको सदुपयोग गरौ । यो समयलाई आमा,बुवा,छोरा ,छोरी संग धेरै कुरा सिक्ने सिकाउने अबसरको रूपमा ग्रहण गरौं । तर हामी फेरि घरमा बस्न गा¥हो भयो भनेर गुनासो गर्दैछौ । कोभिडले हामीलाई हाम्रो जीवनको कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ ।
जीवनशैली त्यतिबेला महत्वपूर्ण लाग्दछ जब हामी आफुलाई अरु संग तुलना गर्दछौं । जहिले सम्म तुलना गर्दछौं र हामी आफुमा धेरै पाउने चाहाना राख्दछौ दुख तिनै कारणले निम्त्याउछ । आउनुस् यि सबै कुरा छोडेर खुलेर बाचौ । हाम्रो कारण अरुमा खुसी खोजौ । करिब सय बर्ष अघि स्पेनिस ईन्फ्लुुयन्जा महामारी हुँदा दुई बर्ष सम्म मानिस घरमा थुनिनु परेको थियो । महान बैज्ञानिक सर आई ज्याक न्युटन शहरको घर जोखिम हुने भएकाले गाउमा बसेका थिए । त्यही बसाईका क्रममा उनले स्याउ जमिन तर्फ खसेको देखे । उनको मनमा माथी नगएर भुई तिर नै किन खस्यो भन्ने मनमा प्रश्न उठ्यो । त्यसको अनुसन्धान गर्दा गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लाग्यो । हामिले महान बैज्ञानिक भन्न पाएका छौ । अहिलेको समय बाध्यताको हो तर सृजनात्मक बनाउन सके अवसर बन्न सक्छ । मिठो आँपले पनि त हुरी र असिना पानीको सामना गरेको हुन्छ । हामीले त सृष्टीकै उत्कृष्ट जीवन पाएका छौ । हरेक सासलाई सुन्दर तरिकाले फेरौ । किनकि संसारमा प्रतिदिन लाखौंले चाहेर पनि बाँच्न पाएका छैनन् । समयमा कमाई भएन भनेर पिर नगरौ किनभने खर्च गर्ने ठाउँहरु बजार,होटल,पार्क सबै बन्द छन् । कम आम्दानीले पनि सामान्य जीवन चलाउन सकिन्छ । अरु कोहि म भन्दा शानदार बाँचेको छ वा धेरै कमाएको छ भन्ने बिषय हाम्रो मुल मुद्दा हुनुभएन ।
जीवन हामीले लगाउने कपडा वा चढ्ने गाडी संग जोडेर बुझ्ने गरेका छौ , त्यसको फलस्वरूप अनावश्यक तनाव झेल्नुपरेको छ । पछिल्लो एक बर्ष भन्दा यता कोरोना भाईरसको संक्रमणसंग जुध्दै आईरहेका छौ । यो समयमा हामी कुनै पनि बेला संक्रमित हुन सक्दछौ यसबाट टाढा रहन स्वास्थ सावधानी अपनाउनु अनिवार्य छ । हाम्रो देशमा सरकारले खोप अभियान पनि चलाएको छ । विषम परिस्थितिमा अग्र स्थानमा रहेर काम गर्ने र जेष्ठ नागरिक केहिलाई बाहेक सबैलाई प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । खोप अभियान महत्वपूर्ण हो तर अन्तिम विकल्प भने होइन । यस्ले केहि हदसम्म अस्पतालको चाप कम गर्न र मृत्युदरमा कमि ल्याउन सहयोग गर्दछ । म संक्रमित हुन्न भनेर आफैंले आफैसंग बाचा गरौं र जो संक्रमित छौ ,उनीहरुले मेरो कारण अरुलाई सर्न दिने छैन भनेर प्रतिबद्ध बनौं । यो भाईरस कुनै जीव जन्तु वा पशुपंक्षी बाट सर्ने होइन मान्छे नै यसको बाहक भएको हुँदा हामी स्वयं जिम्मेवार बनौं । आफू पनि बचौ र अरुलाई पनि बाच्न मद्दत गरौं ।
© 2020, Ratnanagar Online | All rights reserved. | Powered by: KOsYs Monday 05-23, 2022, 1:40 pm